Tinofanira Kunamata Zvifananidzo Here? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Maltese Mapudungun Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuIreland Myanmar Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quichua (Chimborazo) Romanian Russian Réunion Creole Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Hatifaniri kunamata zvifananidzo. Bhuku rinonzi New Catholic Encyclopedia richitaura nezvemitemo yakapiwa rudzi rwevaIsraeri naMwari, rinoti: “Nyaya dzakasiyana-siyana dziri muBhaibheri dzinoratidza kuti pakanga pasingashandiswi zvifananidzo pakunamata Mwari.” Ona zvinotaurwa nemavhesi aya eBhaibheri:
“Usazvigadzirira mufananidzo wakavezwa, kana mufananidzo wechinhu chero chipi zvacho chiri kumatenga kumusoro, kana chiri panyika pasi, kana chiri mumvura pasi penyika. Usazvikotamira kana kunyengedzwa kuti uzvishumire, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara.” (Eksodho 20:4, 5) Sezvo Mwari achida “kuzvipira kwakazara,” haafari kana tikapa rukudzo kana kuti tikanamata zvifananidzo, mapikicha, zvidhori, zvivezwa, kana zviratidzo.
‘Handizopi kurumbidzwa kwangu kuzvifananidzo.’ (Isaya 42:8, Bhaibheri Dzvene MuChishona Chanhasi) Mwari haadi kuti vanhu vamunamate vachishandisa zvifananidzo. Vamwe vaIsraeri pavakaedza kunamata Mwari vachishandisa chifananidzo chemhuru, Mwari akati vakanga vaita “zvinhu zvakaipa kwazvo.”​—Eksodho 32:7-9, Bhaibheri Rinoyera.
“Hatifaniri kufunga kuti Mwari akafanana nendarama kana sirivha kana dombo, kufanana nechimwe chinhu chakavezwa nounyanzvi nouchenjeri hwomunhu.” (Mabasa 17:29) Kusiyana nevanhu vechihedheni avo vanowanzoshandisa mifananidzo ‘yakavezwa nounyanzvi nouchenjeri hwomunhu,’ vaKristu vanofanira ‘kufamba nokutenda, kwete nokuona,’ rinodaro Bhaibheri.—2 VaKorinde 5:7.
“Zvichenjererei pazvidhori.” (1 Johani 5:21) Mirayiro yakapiwa rudzi rwevaIsraeri uye vaKristu, inoratidza kuti nguva dzose Bhaibheri rinoti dzidziso yokuti Mwari anoda kunamatwa pachishandiswa zvifananidzo nezviratidzo ndeyenhema.
Mwari Anoda Here Kuti Tishandise Mifananidzo Pakunamata?
Zvinotibatsira here kuswedera pedyo naMwari watisingaoni?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Tinofanira Kunamata Zvifananidzo Here?
ijwbq nyaya 64